Top 5 máy hút bụi cầm tay Xiaomi đáng mua nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 máy hút bụi cầm tay Xiaomi đáng mua nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 máy hút bụi cầm tay Xiaomi đáng mua nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
I-vacuum cleaner iyithuluzi elisebenzayo elisiza abantu ukuthi bahlanze indlu ngokushesha futhi kalula. Ikakhulukazi, isicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla sika-Xiaomi sithandwa abantu abaningi namuhla ngamadizayini ahlukahlukene kanye nekhwalithi enhle. Ngakho Isicoci sevacuum esiphathwa ngesandla sika-Xiaomi Iyiphi engcono kakhulu ongayithenga namuhla? Hlanganyela nathi ukuze uthole ngokuningiliziwe oku-5 okuphezulu kwalesi sicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla se-Xiaomi khona esihlokweni esingezansi.
1 Funda okuncane mayelana nomkhiqizo we-Xiaomi
2 Kungani isicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla se-Xiaomi sithandwa ngabantu abaningi?
2.1 Umklamo ohlangene
2.2 Umsindo ophansi
2.3 Easy disassembly kanye nokusetshenziswa
2.4 Ukusebenzisa isihlungi se-HEPA
3 Izicoci zevacuum eziphezulu ezi-5 ze-Xiaomi ezifanele ukuzithenga namuhla
3.1 1. Ishibhile i-Xiaomi Deerma DX700 isicoci sevacuum esiphathwa ngesandla
3.2 2. I-Xiaomi Deerma CM1300 isicoci sevacuum esingenazintambo esingenazintambo
3.3 3. Isicoci sevacuum esiphathwayo sika-Xiaomi Dreame V9
3.4 4. I-Xiaomi Mijia Cleanfly FV2 engenantambo isicoci sevacuum esiphathwa ngesandla
3.5 5. I-Xiaomi Deerma DX800S isicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla (enebhande elinamathiselwe)
Funda okuncane mayelana nomkhiqizo we-Xiaomi
I-Xiaomi iwuphawu oludumile olugxile ekukhiqizeni imikhiqizo yobuchwepheshe, izinto zikagesi kanye nezinto zikagesi zasekhaya ezivela e-China eyasungulwa ngo-2010. Imikhiqizo yalolu hlobo isetshenziswa ubuchwepheshe besimanje. , advanced of Japan, Europe. Ngesikhathi esifanayo, enezici ezihlakaniphile, ezikahle nezinhle, i-Xiaomi isesimweni esiqinile emakethe namuhla.
Uhlobo lwe-Xiaomi selukhiqizele emakethe imigqa yemikhiqizo esezingeni eliphezulu ethandwa ngabasebenzisi abaningi emhlabeni jikelele. Imikhiqizo yale nkampani ihlanganisa amafoni, amalaptop, imishini yokuwasha, izinto zokuhlanza umoya, izithosa zomoya, njll. Isicoci sevacuum esiphathwa ngesandla sika-Xiaomi Ungomunye wemigqa yemikhiqizo ethengiswa kakhulu yenkampani kusukela yethulwa.
Kungani isicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla se-Xiaomi sithandwa ngabantu abaningi?
Emakethe namuhla, kunezinhlobo eziningi ezahlukene zokuhlanza eziphathwa ngesandla, kodwa izicoci ze-Xiaomi eziphathwa ngesandla zihlala zaziswa futhi ziheha abasebenzisi abaningi. Manje kungani i-vacuum cleaner ye-Xiaomi ithandwa kangaka ngabasebenzisi abaningi? Ake sithole isibuyekezo esinemininingwane mayelana Isicoci sevacuum esiphathwa ngesandla sika-Xiaomi Okulandelayo:
Imigqa Isicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla sika-Xiaomi Iningi lazo linomklamo ohlangene. Ngakho-ke, abasebenzisi akudingeki basebenzise umzamo omkhulu nesikhathi lapho behlanza futhi behlanza indlu, kodwa umphumela awukho ngaphansi kwezinye izinhlobo zokuhlanza okunezintambo ezimakethe. Ngaphezu kwalokho, isicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla se-Xiaomi singase futhi sinwebe ikhanda lokumunca ukuze abasebenzisi bakwazi ukuhlanza kalula izindawo ezingenakufinyeleleka.
Izinga lomsindo we Isicoci sevacuum esiphathwa ngesandla sika-Xiaomi icwaningwe ngokucophelela futhi yenziwa ochwepheshe be-Xiaomi. Ngakho-ke, iningi lama-vacuum cleaner amaningi e-Xiaomi anikeza amandla okusebenza kahle, ngaphandle kokubanga imisindo ecasulayo. Ngesikhathi esifanayo, izinga lomsindo alilokothi lidlule ku-64dB, lilungele ikakhulukazi imindeni enezingane ezincane kanye nabantu abadala.
Easy disassembly kanye nokusetshenziswa
Uchungechunge lwe-Xiaomi lwezihlanzi eziphathwa ngesandla lunomklamo olula kakhulu okwenza kube lula ngabo bonke abasebenzisi ukuwukhohlisa nokuwusebenzisa. Ikakhulukazi, ngisho nabaqalayo bangakwazi ukuyisebenzisa kalula ngaphandle kobunzima ngesikhathi sokuyisebenzisa.
Isicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla sika-Xiaomi Ukuze wenze lokhu, vele uvule iswishi bese uhambisa umshini ezindaweni ezinothuli ezidinga ukuhlanzwa. Ibhokisi lothuli lomshini ngokuvamile libonakala obala, ngakho-ke ungakwazi kalula ukwazi inani lothuli emshinini futhi udinga ukulithulula noma cha.
Ukusebenzisa isihlungi se-HEPA
Imikhiqizo Isicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla sika-Xiaomi Zonke zifakwe isihlungi se-HEPA esikwazi ukuhlunga nokukhipha uthuli olucolekile. Ngasikhathi sinye, ukusebenzisa imisebe ye-UV kusiza ukubulala kufika ku-99.97% wesikhunta namagciwane ayingozi ukusiza ukuvikela impilo nokuletha indawo yokuhlala ehlanzekile nentsha.
Imikhiqizo Ethengiswayo 50% Damas XC628 Cordless Handheld Vacuum Cleaner – Genuine, Damas I-Deerma DX115C isicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla – Iqiniso, i-Deerma I-DEERMA DX128C Isicoci seVacuum Ephathwayo Esincane, i-Deerma I-Deerma-Deerma Vacuum Cleaner DX700 Handheld Vacuum Cleaner – Genuine, Deerma I-UV PerySmith XTREME V20 yombhede wombhede wombhede ongenantambo we-UV PerySmith XTREME V20 – Genuine, PerrySmith I-Deerma DX900 Self-Cleaning Mini Vacuum Cleaner, i-Deerma I-Cordless Handheld Vacuum Cleaner, Enokukhanya Okuphezulu Kwekhwalithi, Amandla Amakhulu Okumunca angu-6000PA, Athule Futhi Anamandla, Owangaphakathi, Ngaphandle Kanye…, VinBuy
Izicoci zevacuum eziphezulu ezi-5 ze-Xiaomi ezifanele ukuzithenga namuhla
Isicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla se-Xiaomi siyaziswa futhi sithenjwa abasebenzisi abaningi namuhla. Lo mugqa womkhiqizo unamamodeli ahlukahlukene, ikhwalithi enhle futhi uletha ukusetshenziswa okuhle okuningi kubasebenzisi lapho usebenzisa. Ake sibheke phezulu 5 Isicoci sevacuum esiphathwa ngesandla sika-Xiaomi Okubaluleke kakhulu ukuthenga namuhla yilokhu okulandelayo:
1. Ishibhile i-Xiaomi Deerma DX700 isicoci sevacuum esiphathwa ngesandla
I-DX700 iyisicoci esihle se-Xiaomi esiphathwa ngesandla esidumile kubasebenzisi abaningi namuhla. Lo mkhiqizo unomklamo obanjwa ngesandla ohlangene, oguquguqukayo, okhanyayo futhi ophathwayo okulula ukuwuhambisa uma usetshenziswa. Lesi sicoci se-vacuum sifakwe isibambo nesibambo esidizayinwe esingu-2-in-1 esikhiphekayo kanye nemibhobho engu-3 enwebekayo ehlukahlukene ukuze isetshenziswe kalula. Ngesikhathi esifanayo, kulula ukuyihlanza futhi ihlangabezana nazo zonke izidingo zokuhlanza ezindaweni ezahlukene endlini.
Ngaphandle kwalokho, I-Xiaomi Deerma DX700 isicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla Lokhu kunamandla okusebenza angu-600W ukuze kukhuculule uthuli ngempumelelo. Nokho, lo mshini usebenza ngokushelela ngokweqile, awubangeli umsindo ongathandeki, izinga lomsindo lingaphansi kuka-64dB kuphela. Lo mkhiqizo uphinde usebenzise ubuchwepheshe benkampani be-Pro Cyclone kanye ne-Rocket Vacuum cyclone ukusiza ukukhulisa ukusebenza kokumuncwa kwephunga nokunciphisa ukusetshenziswa kwamandla. Ngesikhathi esifanayo, kuhlanganiswe nesihlungi somoya se-HEPA ukuhlanza isikhala, ukuletha umoya omusha nomoya.
Intengo yesithenjwa: 735,000 VND/umshini
2. I-Xiaomi Deerma CM1300 isicoci sevacuum esingenazintambo esingenazintambo
I-Xiaomi Deerma CM1300 ingesinye sezicoci ze-vacuum eziphathwa ngesandla ze-Xiaomi okufanele zizithenge namuhla. Lo mugqa womkhiqizo unomklamo olula kodwa ongekho ngaphansi kwesimanjemanje, oyinkimbinkimbi futhi uhlangene ngosayizi nesisindo esincane, ulungele imibhede, omatilasi, ukunakekelwa okuthambile kanye nosofa. Lo mshini uhlanganisa amakhanda okumunca angu-3 ukuze usize ukuncela izinhlobo eziningi nesimo sezwe kalula futhi kalula.
Ngaphandle kwalokho, I-Xiaomi Deerma CM1300 isicoci se-vacuum manual Lokhu kunebhokisi lothuli elibekwe ngaphambili ukuze lisize ukulawula uthuli kalula futhi liguqule kalula umlomo wombhobho. Lo mugqa womkhiqizo ufakwe ubuchwepheshe bokuhlunga obunezendlalelo ezi-3 okuhlanganisa insimbi engu-304, I-Filter Cotton, i-Hepa ukusiza ukuhlunga uthuli kahle nangempumelelo. Ngasikhathi sinye, ifakwe imisebe ye-UV ye-infrared ebulala amagciwane angama-99.9%. Umkhiqizo unamandla okumunca we-12000 Pa nomsindo ophansi osebenza kahle ngaphandle kokubanga umsindo ocasulayo.
Intengo yesithenjwa: 1,120,000 VND/umshini
3. Isicoci sevacuum esiphathwayo sika-Xiaomi Dreame V9
I-Xiaomi Dreame V9 iyisicoci sevacuum esiphathwa ngesandla se-Xiaomi esihle, esiphuma e-China. Lo mugqa womkhiqizo unomklamo ohlangene, ongasindi owenza kube lula ukuwusebenzisa futhi ube lula. Lo mshini ufakwe i-Space3.0 brushless motor enesivinini esikhulu eqalisa ngokushesha okungu-0.3s futhi isivinini esifika ku-100,000 rpm kanye nokumunca okunamandla okungu-120W.
Ngaphandle kwalokho, I-Xiaomi Dreame V9 isicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla Lo mklamo unesihlungi se-HEPA esinezinyathelo ezi-5, ubuchwepheshe bokuhlukanisa amakhoni kanye nomklamo wepayipi lomoya ukuze uvimbele ukumunca ukuze udale amandla aqinile amaphakathi. Ngaleyo ndlela ikwazi ukuhlukanisa kufika ku-99.99% wothuli nempova evalelwe enkomishini yothuli. Umkhiqizo futhi unemiklamo emi-4 yekhanda eguquguqukayo okulula ukuyishintsha kanye nomthamo omkhulu webhethri we-2500mAh imizuzu engama-60 wokusetshenziswa okuqhubekayo.
Intengo yesithenjwa: 3,390,000 VND/umshini
4. I-Xiaomi Mijia Cleanfly FV2 engenantambo isicoci sevacuum esiphathwa ngesandla
I-Xiaomi Mijia Cleanfly FV2 isicoci sevacuum esiphathwa ngesandla Isicoci se-vacuum esiphathwayo esingenantambo se-Xiaomi kufanelekile ukusithenga namuhla. Lo mugqa womkhiqizo unomklamo ongenazintambo ohlangene, isisindo esilula kanye nokubamba okuqinile okulula ukuwuhambisa nokuwusebenzisa. Ngesikhathi esifanayo, umkhiqizo unesitsha sothuli esisobala esenza kube lula ukubona ukuthi uzokhipha nini futhi nini ukuhlanza. Lo mshini unamandla afinyelela ku-120W, 100000 rpm ukuze ususe ngempumelelo ukungcola nothuli.
Ngaphandle kwalokho, lesi sicoci esiphathwa ngesandla se-Xiaomi Mijia sinemisebenzi eminingi yokusiza ukuhlanza kahle wonke amagumbi endlu. Ngesikhathi esifanayo, idivayisi inomthamo omkhulu webhethri engu-2000mAh engasetshenziswa ngokuqhubekayo imizuzu engu-25. Lo mugqa womkhiqizo uphinde ufakwe i-air duct aerodynamics ukunciphisa ukumelana komoya futhi usebenze kahle nangomsindo ophansi.
Intengo yesithenjwa: 1,499,000/umshini
5. I-Xiaomi Deerma DX800S isicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla (enebhande elinamathiselwe)
I-Xiaomi Deerma DX800S iyisicoci sevacuum esihle se-Xiaomi esithandwa ukusisebenzisa namuhla. Lo mshini unosayizi ohlangene wokusiza abasebenzisi bonge umzamo lapho behlanza. Ngesikhathi esifanayo, lo mkhiqizo unebhande elikhiphekayo elilula futhi elilinganiselwe namandla asebenza ehlombe ukusiza ukuhlanza izindawo eziphakeme kalula. Ngasikhathi sinye, lo mshini ufakwe ama-nozzles okumunca ama-5 ukuze uhlanze kahle izindawo ukuze uhlangabezane nezidingo ezahlukahlukene zabasebenzisi.
Enye indlela, I-Xiaomi Deerma DX800S isicoci sevacuum esiphathwa ngesandla yakhelwe ngaphakathi kwemifudlana engu-2 ehlukene yokungenisa umoya ukuze kwandiswe ukusebenza kahle kokuhlanza ngamandla okudonsa komoya afika ku-14000Pa kanye nesivinini esingu-38500 rpm. Lo mugqa womkhiqizo uphinde ufakwe isihlungi esinezingxenye ezi-4 ukusiza ukuhlunga ukungcola nokukhipha umoya ohlanzekile, ongasuswa lapho kudingeka.
Intengo yesithenjwa: 2,085,000 VND/umshini
Nalu ulwazi olwabiwe mayelana nabangu-5 abaphezulu Isicoci sevacuum esiphathwa ngesandla sika-Xiaomi Thenga okungcono kakhulu manje. Ngethemba ukuthi lokho kukusiza ukuthi uqonde kangcono umkhiqizo futhi ukhethe imodeli evumelana nezidingo zomndeni wakho ukuletha indawo ehlanzekile nengenamoya endlini.
Top 12+ điện thoại quay video tốt nhất 2021 mà bạn nên mua | Muasalebang
Máy giặt Samsung báo lỗi 4C khi nào? | Muasalebang